Pat McGrath Labs က ချပြလိုက်တဲ့ အလန်းစား Eyeshadow Palettes! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Pat McGrath Labs က ချပြလိုက်တဲ့ အလန်းစား Eyeshadow Palettes!
Pat McGrath Labs က ချပြလိုက်တဲ့ အလန်းစား Eyeshadow Palettes!
Pat McGrath လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အကုန်လုံးဟာ ကမ္ဘာကျော် မိတ်ကပ်ပညာရှင်ကို တခါတည်းပြေးမြင်မိမှာ အမှန်ပါပဲ။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်တိုင် ယခုအချိန်အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အပြင် ဖန်တီးချပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာလည်း သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်တာကြောင့် လူတကာနှစ်သက်ကြတဲ့ Brand ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာလည်း အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး သုံးစွဲမယ့်သူတွေအကြိုက်တွေ့မယ့် Eyeshadow Palette ၃ မျိုးကို ချပြမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Eyeshadow Palette တွေမှာ အဓိကအားဖြင့် အရောင် ၆မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
#MTHRSHP Sublime Bronze Ambition Eyeshadow Palette
ဒီ Eyeshadow Palette လေးမှာပါဝင်တဲ့ အရောင်တွေဟာ တကယ်ပဲ Royal ဆန်တဲ့ အပြင်အဆင်အရောင်မျိုးကို ဖန်တီးပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ Creamy, Metallic, Pearlized Pigment တွေပါပါဝင်တာကြောင့် လိုသလို အလွယ်တကူ ဖန်တီးအသုံးပြုနိုင်မယ့် Palette လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
#MTHRSHP Subversive La Vie En Rose Eyeshadow Palette
အရောင်ဆန်းဆန်းလေးတွေကို စမ်းသပ်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့ Consumers တွေအတွက် ဒီ Eyeshadow Palette လေးဟာ အရမ်းကို အသုံးဝင်မှာပါ။ လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိမ်းခြယ်လို့ရသလို ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာလည်း တခါတည်း အာရုံဖမ်းစားနိုင်လောက်တဲ့အထိ လှပတဲ့ အရောင်အသွေးတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပြန်မှာပါ။
#MTHRSHP Subliminal Platinum Bronze Eyeshadow Palette
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီး အထာကျတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ဖန်တီးချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် ဒီ Palette လေးဟာ အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ Palette လေးဖြစ်မှာပါ။ Smoky Eye ပုံစံမျိုးဖန်တီးလိုသူတွေအတွက်လည်း အလွယ်တကူ ဖန်တီးလို့ရအောင် Colour လေးတွေပါဝင်တာကြောင့် သုံးစွဲသူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာ အသေအချာပါပဲ။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၅၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး Rose Lady Branded Collection Online shop ကနေလည်း မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source : www.patmcgrath.com
ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဖုန်မှုန့်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Cold Cream!
တစ်ကယ့်ချိုချဉ်လေးတွေအလား ထင်မှားရမယ့် The Saemရဲ့ Saemmul Mousse Candy Tint Series